Android အတွက် JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Log App APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » JEFIT လေ့ကျင့်ခန်း Tracker, အလေးချိန် LIFT, အားကစားရုံ Log in ဝင်ရန် App ကို
JEFIT လေ့ကျင့်ခန်း Tracker, အလေးချိန် LIFT, အားကစားရုံ Log in ဝင်ရန် App ကို APK ကို
JEFIT အားကစားရုံ log ကိုသုံးပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ခြေရာခံလွယ်ကူပါတယ်။ ကာယဗလ,3နေ့ကပြိုကွဲရာမှ Programs ကို,5အိမ်မှာလေ့ကျင့်ခန်း & ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရုတ်သိမ်းဖို့5& အစှမျးသတ်တိအစီအစဉ်များ×။
★က Google Editor ကိုဖွင့်ရွေးချယ်မှု★အမျိုးသားများရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေး Play - သင်နယူးတစ်နှစ်အသစ် - အကောင်းဆုံးကြံခိုင်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေး Apps ကပ★ USA Today
သန်း 8 ကျော်ကလူဟာသူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုခြေရာခံနှင့်သူတို့၏အလောင်းများကိုအသွင်ပြောင်းဖို့ JEFIT ကိုအသုံးပြုပါ။
JEFIT, စီမံ app ကိုခြေရာခံအရေအတွက်ကတဦးတည်းလေ့ကျင့်ခန်း, သငျသညျမထိုက်မတန်နေဖို့ကူညီပေးပါတိုးတက်မှုစေနှင့်သင့်အားကစားရုံသို့မဟုတ် home ကြံ့ခိုင်ရေးအစည်းအဝေးများထဲကအများဆုံးရရန်အခမဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးအစီအစဉ်ကိုဒေတာဘေ့စပေးပါသည်။ bodyweight, ကန့်သတ်အာကာသသို့မဟုတ်အထူးပြုပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု. အစီအစဉ်များမှအဆင့်မြင့်ကာယဗလ, အလေးမ, အလေးမအားကစားသို့မဟုတ် kettlebell လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရန်ခွန်အားစတင်5× 5, 531, stronglifts,3သို့မဟုတ်4နေ့ကပြိုကွဲတူသောအစပြုအစီအစဉ်များမှ, JEFIT သင်လိုအပ်တစ်ခုတည်းသောယလေ့ကျင့်ခန်း App ဖြစ်ပါတယ်။
အဘို့ဤ app ကိုကားအဘယ်သူနည်း
သင်တစ်ဦးဂျာနယ်, စီမံသို့မဟုတ်ပဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဇယားအပေါ်အားကစားခန်းမမှာလေ့ကျင့်ရေးကိုချစ်၌သင်တို့၏လေ့ကျင့်ခန်း logged င့်ဆိုပါက, JEFIT အရင်ကဆိုရင်ထံမှအဆင့်မြင့် lifters မှသင်သည်သင်၏အစွမ်းသတ္တိကိုအလေးချိန်နှင့်အဆီဆုံးရှုံးမှုရောက်ရှိရန်ကူညီခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးရည်မှန်းချက်များပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ app ကို, ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုဘို့သင့်ကိုဆုချီးအသစ်များကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်တမ်းများမှကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေးနှင့်ရပ်ရွာနှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုများမှကျူးလွန်အားဖြင့်သင်တို့ကိုလှုံ့ဆော်စေပါတယ်။
●က်ဘ်သို့မဟုတ် App ကို - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ် app ပေါ်တွင် app နဲ့ပြင်ဆင်ရန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေနဲ့ခြေရာခံ။
● Track ယလေ့ကျင့်ခန်း - သင့်လေ့ကျင့်ခန်း, လမ်းကြောင်းအလေးနှင့်ကိုယ်စားလှယ်များ Set ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ရေး၏ရလဒ်များကိုပြသပါလိမ့်မယ်
●လေ့ကျင့်ခန်းညွှန်ကြားချက်ဒေတာဘေ့စ - 1300 + ဆန္ဒပြပွဲများနှင့်မူကွဲကျော်ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ HD ဗီဒီယိုနှင့်အတူ
●အလိုလို Tools များ - ငြိမ်ဝပ်စွာ နေ. Timer, Supersets, Interval သည် timer, ခန္ဓာကိုယ်တိုင်းတာခြင်း Log in ဝင်ရန်, မှတ်စုများ, ဇယား Planner ကမှတ်စုများ
●သင်တန်းအစီအစဉ်များ - အစွမ်းသတ္တိကိုကာယဗလ, 3, အလေးမ, အလေးမအားကစား, GZCLP, Greyskull, ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်စတင် 4,5သို့မဟုတ်5နေ့ကပြိုကွဲဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များကို, အဆီဆုံးရှုံးမှု, stronglifts,5× 531,
●လှုံ့ဆော်နေပါ - ငွေသားဆုများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လစဉ်ကြံ့ခိုင်ရေးစိန်ခေါ်မှု Join နှင့်ရပ်ရွာအခြားအားကစားရုံ goers ထံမှထောက်ခံမှုရရှိရန်။ ဒါ့အပြင်သငျသညျအစှမျးသတ်တိတိုးတက်အောင်သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိနိုင်အောင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့် LIFT နှိုင်းယှဉ်ရန်သင့်ရဲ့အားကစားရုံသူငယ်ချင်းများ add ပိန်ကြုံလာပြီ, Tone သို့မဟုတ်ပဲတက်ကြွစွာတည်းခို
●သတ်မှတ်မည်ရည်မှန်းချက်များ - တသမတ်တည်းကိုယ်အလေးချိန်စေချင်, ပိန်ကြုံရပိုမိုအားကောင်း get သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်း? သငျသညျ JEFIT ရဲ့ထုံးစံဂျာနယ်ထဲမှာတည်ဆောက်နိုင်
●သူငယ်ချင်းများ Add - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအသစ်ကြံ့ခိုင်ရေးသူငယ်ချင်းများကိုရှာပါ။ ကအားကစားရုံမှာသငျသညျကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ဒါမှမဟုတ်ကာယဗလအကြံပေးချက်များနှိုင်းယှဉ်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်။
အပြည့်အဝညွှန်ကြားချက်ဒေတာဘေ့စနှင့်အတူမည်သည့်ကြံ့ခိုင်ရေးအဆင့် Programs ကို
✔ Beginner Programs ကို - Stronglifts,5× 5, အစွမ်းသတ္တိစတင်ကာ3နေ့ကပြိုကွဲ
✔အဆင့်မြင့် Programs ကို - အလေးမအားကစား, ကာယဗလ, 531, GZCLP, Greyskull
✔ပစ်မှတ် Programs ကို - ABS, လက်နက်, Glutes, အဆီနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်း, Tone
✔ကိုယ်ပိုင်သင်တန်း - လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာကတည်ဆောက် Get
✔အားကစားလေ့ကျင့်ရေး - ဘေ့စဘော, အာကာသ
✔ပစ္စည်းအာရုံစူးစိုက် - ကီထိုင်ထိန်သိမ်း, လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်း, kettlebell, Dumbbells
✔ Bodyweight သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးပစ္စည်း - တေးဂီတအဖွဲ့များ, ဖျာ, စက်သာလျှင်, Core အာရုံစူးစိုက်
✔ kettlebell, Cardio, တိုက်နယ်သင်တန်း, အာကာသလီမိတက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်
အထူး tools များနှင့်အင်္ဂါရပ်
Desktop ကိုနဲ့ Web ကနေ✔ Access ကို
✔အနားယူ Timer - ရုတ်သိမ်းပေးရန်လာသောအခါသတိပေးထုံးစံကြိမ် Set
✔ Supersets နှင့်ဆားကစ်လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထောက်ခံ
✔ Interval သည် Timer, သတ်မှတ်မည်မှတ်စုများနှင့် 1 ကိုယ်စားလှယ်မက် Calculator ကို
✔လူမှု Feed နှင့် Community ပြိုင်ပွဲ
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာနှင့်အတူမိုးတိမ်များနှင့်ရှယ်ယာအတွက်✔ Store ကိုယလေ့ကျင့်ခန်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စအတွက်အပြည့်အဝနဲ့ HD ဗီဒီယိုများနှင့်အတူထောက်ခံ 1,300 လေ့ကျင့်ခန်း
✔လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်း, Dumbbell, စက်များ, Cable ကို, Band
✔ Cardio, Elliptical, လှေလှော်, ဆိုင်ကယ်, ရေကူး
✔တည်ငြိမ်သောလှုပျရှားမှု, ပျဉ်ပြား, န့ ်. , ABS
အခြားအသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်အားကစားရုံရဲ့ buddy ဆန့်ကျင်✔ Benchmark
✔ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများကို PR စနစ်ခြေရာခံခြင်း
တိုးတက် Log in ဝင်ရန်မှတ်တမ်းတင်ဒီဇိုင်း။
တိုးတက်အနားယူ timer နေရာမှာ - ယခု timer နေရာမှာတောင်မှကြွင်းသောအရာ timer နေရာမှာမျက်နှာပြင်ထဲက navigate ဆက်လက်ရှိပါလိမ့်မည်။
တိုးတက်အနားယူ timer နေရာမှာ - လွယ်ကူ rester timer နေရာမှာ screen ပေါ်မှာအချိန်ကိုထိန်းညှိဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
တိုးတက်အနားယူ timer နေရာမှာ - ကြွင်းသောအရာ timer နေရာမှာတောင်မှ app ကိုနောက်ခံမှ switched ခဲ့သည်ပယ်သွားပါလိမ့်မယ်။
JEFIT လေ့ကျင့်ခန်း Tracker, အလေးချိန် LIFT, အားကစားရုံ Log in ဝင်ရန် App ကို
29.49 ကို MB
Jefit Inc က
Nike ကသင်တန်း ...